पुस्तान्तर | मझेरी डट कम
ks — Mon, 12/03/2012 - 21:16
छोरो रेमण्डले भर्खरै भकुण्डो हानेर ठहरै पारेका तीनवटा कुखुराका चल्ला र मृत्युको छेउमा पुगेर छट्पटिएको पोथीलाई हेर्दै निरानन्दले भने, “के जमाना आयो ! बरु कुलंगार सन्तान हुनुभन्दा त नभएकै जाति ।”
आज बिहानैदेखि पाँचहजार रुपैया चाहियो भन्दै निकै संग्राम मच्चायो । पाँच सय निकाल्ने हुती छैन कहाँबाट पाँच हजार ल्याउँने भनेर उसकी आमाले भनेकी थिई । झण्डै आमा चाहिंलाई नै हात मिस्यो ।
“सुड्डो, बुड्स भनेको के रे बाबु ?” निरानन्दले छिमेकोको छोरो अविनाससँग सोधे ।
“कसले भन्यो र बा ?”
रेमण्डले “यो साला सुड्डो बुड्सले पनि काम काटेन” भन्दै फलाक्दै हिडेथ्यो ।
“बा ! मुन्द्रेहरूले बूढा मान्छेहरूलाई सुड्डो, बुड्स भन्छन् ।”
निरानन्द उहिले र अहिलेको जमाना र मान्छेको तुलना गर्छन् । उसको काका सुन्दरमणी कति इमान्दार र आज्ञाकारी थियो । ऊ गर्भे टुहुरो भयो । आमाको माया पनि धेरै पाएन । मैले नै हुर्काएँ । उसकी भाउज्यू बिहे गरेर ल्याउँदा कतिको नै भएको थियो र ? अँगेनाका छेउमा पाखुराले सिगान पुछदै बसेको थियो ।
उसलाई सबै कुरा सिकायौं । दिनभरि काम गरेर आएपछि म बाच्छा-पाडा गर्थे, उसकी भाउज्यू खाना बनाउँथी, ऊ दाउरा-पानी गर्थ्यो । खाना सकेपछि भाउज्यू चूलो सफा गर्थी, ऊ भाँडा माझेर ल्याउँथ्यो । बजारबाट आउँदा उसले नूनतेल र सामलको भारी बोक्थ्यो, भाउज्यू अघि अघि सानो झोला बोकेर आउँथी । कति मायाले पालेकी थिई । छोटो आयुको रहेछ, उमेरै नभई उपरतलीले लग्यो ।
रेमण्डको कुरै छोडौं ! न्वारनमा बाजेले धरणीप्रसाद नाम राखी दिए, पाखे भएर रेमण्ड राखेको रे । यताको सिन्को उता सार्दैन, साँझ बिहानै मुख लाग्छ, आदर सम्मान, मान-मनितो त जानेकै छैन । कपाल कहिले दूम्सीका काँडा जस्तो पार्छ, कहिले भालेको सिउर जस्तो पारेर हिंड्छ । डोरी र सान्गली झुन्डिएका नयाँ पेन्ट काटेर प्वालै प्वाल पारेर घुँडा सम्मका चुच्चा जुत्ता लगाउँछ । घाटीमा केका माला भिरेका हुन् ?
होइन यो केटालाई साढे सातले नै छोएको छ कि के हो ? कसरी यो तीस पैतिस बर्षभित्रमा मान्छे र मानवता वीचमा यति ठूलो परिवर्तन आयो ? पुराना मान्छेहरू सबै उस्तै छन् । प्रकृति वातावरण, यो गाउँठाउँ सबै उस्तै छन् । फरक छ भने गाउँमा बाटो बिजुली धारा र अलि अलि स्कूलहरू बने । के बोर्डिंग स्कूल र आधुनिक पढाइको प्रभाव हो ? शहरिया मान्छेसँगको संगत हो कि ! यति चाँडै पुस्तान्तर हुन्छ त ... ?
मेरो ढका टोपी,,,,,,,,मेरै खुकुरी,
कति सुन्दर हुन्थ्यो दुनिया माझ
निर्वाण चाहन्छ ऊ